कजकोमा के हेर्ने, जसको ऐतिहासिक केन्द्र विश्व सम्पदा स्थल हो Absolut यात्रा
लुइस मार्टिनो | | पेरु
प्लाजा डे आर्मस
यदि तपाईले कहिल्यै कुज्कोमा के हेर्ने भनेर सोच्नु भएको छ भने, तपाईले सबैभन्दा पहिले जान्नु पर्ने कुरा यो हो कि यसको एन्डियन क्षेत्रको समृद्ध इतिहासमा यसको महत्व छ जुन संविधानको संविधानको हो। पेरू यो को कोटी दिन्छ देशको ऐतिहासिक राजधानी। त्यसमा पनि अचम्म लागेन Inca साम्राज्य जुन कि पूर्व कोलम्बियाली संस्कृति को पुरानो मन्दिरहरु द्वारा देखाईएको छ र यो पौराणिक को प्रवेशद्वार हो माचू पिचू.
माथिका सबैसँगसँगै यसको कब्बल र साँघुरो सडकहरू, साथै यसका असंख्य बारोक चर्चहरू, औपनिवेशिक घरहरू र दरबारहरूले कुज्कोको घोषणा गर्न निम्त्याएको छ। विश्व सम्पदा र लागि परिचित हुन "अमेरिकाको रोम"। हाल, पेरू शहर रहस्य र आधुनिकताको एक जिज्ञासु मिश्रण हो, यसका सडकहरूमा अराजकता र यसको मन्दिरहरूमा शान्ति। यदि तपाइँ कुजकोमा के हेर्न चाहानुहुन्छ भने यस यात्रामा हामीलाई अनुसरण गर्नुहोस्।
1 कज्कोमा के हेर्ने: मुख्य स्मारकहरू
1.1 प्लाजा डे आर्मस
1.2 ग्रहणको भर्जिनको क्याथेड्रल बेसिलिका
1.3 येशू सोसाइटीको चर्च
1.4 हातुन रुमिओक स्ट्रिट
1.5 सान ब्लास पड़ोस
1.6 सान्टो डोमिंगो र कोरिचेन्का कन्भेन्ट
1.7 इग्लेसिया डे ला मर्सिड
1.8 सान्ता क्लारा आर्क
1.9 घर र महलहरू
1.10 माचू पिचू र अन्य ईन्का बाँकी छ
2 कुज्को ग्यास्ट्रोनोमी
3 तपाईका लागि कुजको भ्रमणको लागि उत्तम समय
4 कुज्कोमा कसरी पुग्ने र शहर वरिपरि घुम्ने तरीका
कज्कोमा के हेर्ने: मुख्य स्मारकहरू
एन्डियन शहरको सब भन्दा सान्दर्भिक स्मारकहरू यसमा तार्किक रूपमा छन् ऐतिहासिक केन्द्र, जसमा केवल एक सय भन्दा बढी भवनहरू सूचीबद्ध छन्। ती सबैलाई समावेश गर्ने असम्भवतालाई देखते, हामी तपाईंलाई सबैभन्दा उल्लेखनीयको बारेमा बताउन जाँदैछौं।
यो प्राचीन कालदेखि कज्कोको तंत्रिका केन्द्रहरू मध्ये एक हो। वास्तवमा, यो पहिले नै Incas को लागि थियो, जसले त्यहाँ सबै प्रकारका समारोहहरू मनाउँथे। तर उनीहरूले दरबारमा निर्माण गरेका दरबारहरू स्पेनी उपनिवेशहरूले निर्माण गरेका ठाउँहरू खोल्न अदृश्य भए, जुन अद्भुत पनि छ। अर्कोतर्फ, आदिवासी नेता जोसे गब्रिएल कोन्डोरक्नुकीलाई त्यहाँ १ 1781१ मा मारिए। तुपाक अमारु। त्यहाँ दुई स्मारकहरू छन् जुन तपाईं प्लाजा डे अरमासमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तर दिमागमा राख्नुहोस्, जब कुज्कोमा के हेर्ने भनेर श in्का लाग्छ, यो ठाउँ हुनै पर्छ।
ग्रहणको भर्जिनको क्याथेड्रल बेसिलिका
सबैभन्दा पहिले यस चर्च हो जुन १ XNUMX औं र १ XNUMX औं शताब्दीमा बनाइएको थियो जसको दरबार भएको थियो Viracocha। उसको हाइलाइटहरू पुनर्जागरण अनुहार। यो एउटा मन्दिर हो जुन पाँचवटा गुफाले बनेको छ, जसमध्ये दुईवटा चैपललाई समर्पित छ, र समतल अगाडि। तर यस क्याथेड्रलको सब भन्दा सुन्दर कुरा तपाईले भित्र भेट्टाउनुहुनेछ बारोक, लेट गोथिक र प्लेटरेस्क वेदाहरू नक्काशी गरिएको छ र साथै को चित्रहरु संग कुज्क्वा स्कूलजुन सम्पूर्ण औपनिवेशिक अमेरिकामा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण थियो।
मन्दिरहरूले पूरै क्याथेड्रल पूरा गर्दछ Triumph कोजहाँ शहरको पहिलो क्याथोलिक क्रस राखिएको थियो, स्पेनबाट ल्याइएको, र Sagrada Familia को, एन्डसाइट ढु stone्गाले बनेको र एक सुन्दर बारोक वेदपीस छ।
येशू सोसाइटीको चर्च
यो दोस्रो ठूलो भवन हो जुन तपाईं प्लाजा डे अरमासमा भेट्नुहुनेछ। एन्डसाइटमा र गुलाबी बेसाल्टमा पनि निर्मित, यसमा एक नेभ र दुई साइड चेपलहरू छन् जुन यसको फ्याडेड र यसको दुई टावरसँग मिल्दछ। पहिलो उद्घाटनमा हो जुन सेगमेंटल आर्च द्वारा मुकुट गरिएको छ। यसको एक पक्षमा छ Loreto को हाम्रो महिला को चैपल, जसको वास्तु शैली बारोक मुख्य मन्दिरको संग मेल खान्छ।
हातुन रुमिओक स्ट्रिट
यो कुज्कोमा के हेर्ने भनेर सबै गाईडहरूमा देखा पर्दछ। किनभने ईन्काका भवनहरू, औपनिवेशिक र रिपब्लिकन अवधिको यसमा सुपरइम्पोज गरिएको छ। यसका साथै स्यान पेड्रो, मन्तस र अल्मुडेना जस्ता अन्य सडकहरूको साथ यो गठन गरियो Inca ट्रेल त्यसले एन्टिसुयोलाई एकजुट गर्‍यो, जहाँ माचू पिचू कन्टिस्युयोको साथ छ। यी क्षेत्रहरू वा "तपाइँको" दुई हुन् जहाँ ईन्का साम्राज्य विभाजित गरिएको थियो।
यस सडक मा छ पलासियो अरजोबिस्पाल, एक सोलोनिक स्तम्भहरू द्वारा सीमित बारोक फॅएडेडको साथ औपनिवेशिक शैलीको घर। भवनको अंश पनि प्रसिद्ध छ बाह्र कोण ढु St्गापुरानो ठाउँको Inca Roca दरबार, कुज्को क्षेत्रको छैठौं राजा।
सान ब्लास पड़ोस
अघिल्लोको नजिकको पहाडमा, यो जिल्ला हो, एन्डियन सहरको सब भन्दा सुन्दर चित्र हो। यो साँघुरो र ठाडो सडकहरू, यसको आकर्षक वर्ग र सान ब्लासको चर्च यसको मुख्य आकर्षण हो। यो मन्दिर शहरको सब भन्दा पुरानो हो, यो इन्का अभयारण्यमा निर्माण गरिएको थियो र यसको सेतो धुने पर्खालहरूको बाहिर खडा छ।
सान्टो डोमिंगो र कोरिचेन्का कन्भेन्ट
पहिलो रेनेसान्स शैलीमा छ, जबकि यसको टावर बारोक छ। तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, भित्र तपाईले अवशेषहरू देख्न सक्नुहुन्छ कोरिचाca्काजुन सूर्य देवलाई समर्पित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्का अभयारण्य हो।यस मन्दिरको महत्त्वले तपाईंलाई यस तथ्यको कल्पना दिनेछ कि यसको पर्खालहरू सुनको शीट्सले ढाकिएका थिए र यसका मूर्तिहरू पनि त्यस्तै महान सामग्रीले बनेका थिए। चाँदी एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यी पानाहरू काजमार्का लगिएको थियो फिरौती तिर्न अताहुअल्पा, Incas को अन्तिम सार्वभौम।
इग्लेसिया डे ला मर्सिड
यो एक निर्माण हो नियोक्लासिकल बारोक बेल टावरको साथ जो एक कन्भेन्ट र स्कूलको रूपमा एनेक्सी गर्दछ। भित्र पनि नियोक्लासिकल र बारोक वेदाहरू छन्। तर यो सबै भन्दा माथि खडा छ मर्सिडेरियन हिरासत, सुन र बहुमूल्य पत्थरहरूमा एक शानदार सुनको काम।
एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाइँलाई भन्छौं कि हरेक पवित्र सोमबार यस मन्दिरमा आइपुग्छ डरको मालिक, नासरतका येशूको व्यक्तित्व जो कुज्को शहरको संरक्षक हुनुहुन्छ।
सान्ता क्लारा आर्क
तपाईं यसको एक छेउमा फेला पार्नुहुनेछ सैन फ्रांसिस्को वर्ग। यो एक विजय कमान हो कि स्वतन्त्रता नेता निर्माण गर्न आदेश दिए एन्ड्रेस डि सान्ता क्रुज १ 1835 मा पेरू-बोलिभियन कन्फेडेरेसनको सुरुवातको सम्झना गर्न। यो अर्धवृत्ताकार आर्च हो जुन आयनिक स्तम्भहरू द्वारा फ्रेम गरिएको छ र दुई कन्डोरहरू र स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्ने मूर्तिबाट माथि छ।
घर र महलहरू
तपाईंले कुज्को असंख्य महलहरू र कुलीन घरहरू पनि हेर्नुपर्नेछ। यसको बीचमा हामी तपाईलाई औपनिवेशिक मन्सेन्स प्रस्तुत गर्दछौं त्यो रोड्रिग्ज वारसहरूको हो, ला ओचोआ रा वा ट्रोको हाउस, भेले Umbroso को Marquis को, ओब्लिटाको o त्यो माटेओ पमाकाहुआ हो.
माचू पिचू र अन्य ईन्का बाँकी छ
हामीले उल्लेख गरेका सबै र अरु धेरै पेरू शहरको आश्चर्यकर्महरू हुन्। तर अझ प्रभावकारी भनेको तपाईले शहर वरिपरिको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र केहि अगाडि अफिल। कुनै चीजको लागि होईन, कुज्को पूर्ण छ Incas 'पवित्र घाटी.
यसबाट केवल तीन किलोमिटर तपाईंसँग पहाड छ Sacsayhuman, जसले तपाईंलाई शहर को शानदार दृश्य प्रस्ताव गर्दछ। थप रूपमा तपाईले त्यहाँ पुरानो पर्खालका अवशेषहरू भेट्टाउनुहुनेछ, तीन पows्क्ति पर्खालहरूको विशाल ढु stones्गाले बनेको र जिगजागमा व्यवस्था गरिएको।
यद्यपि कुचकोमा see० किलोमिटर टाढा भए पनि माचू पिचूको इन्का गढीको बारेमा नगरीकन के हेर्ने भनेर कुरा गर्न असम्भव छ। किनकि यो पेरूमा मुख्य पर्यटक फोकस हो र यसको अत्यधिक एथनोग्राफिक र ऐतिहासिक मूल्य छ।
१ 1902 औं शताब्दी अघि निर्माण गरिएको, यो १ XNUMX ०२ मा कुजको जमिन मालिकले पत्ता लगाएको थियो Agustin Lizárraga, जबकि गुणहरु मा गए हीराम बिंगहम, एक अमेरिकी अन्वेषक यो एक विवाद हो जुन आज सम्म जारी छ तर हाम्रो यात्राको लागि यो अप्रासंगिक छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एक थियो llaqta, एक Inca अवधि जुन हाम्रो प्रशासनिक क्यापिटलको बराबर हुन्छ। यो दुई क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ: पहाडमा टेरेसहरू भएको कृषि क्षेत्र, र शहरी क्षेत्र, घरहरू, दरबारहरू र एल सोल जस्ता मन्दिरहरू सहित। यो केवल विश्व सम्पदा होइन, पूरै क्षेत्र हो नाममा समाहित, सम्पूर्ण मचू पिकुको ऐतिहासिक अभयारण्य बीचमा फिगर विश्वको नयाँ सात आश्चर्य.
यो असम्भव छ कि हामी तपाईंलाई पुरानो Inca शहर मा देख्न सक्ने सबै उद्धृत गर्न। तर हामी यो उल्लेख गर्नेछौं पवित्र वर्ग मुख्य र तीन विन्डोज मन्दिरहरूको साथ; को शाही निवास, गढीमा सबैभन्दा ठूलो बसोबास; को intihuatana पिरामिड, टेरेसको रूपमा; को मोर्टार र कन्डोरको समूह, अनुष्ठान उपयोग को दुबै; को पवित्र चट्टान र फोउन्टेन्स स्टेयरवे, यसको सोलह झरनाहरु संग।
यदि तपाईंलाई मनपर्‍यो भने ट्रेकिङतपाईं कल गर्न सक्नुहुन्छ Inca ट्रेल, जुन माचू पिचूको मुख्य पहुँच मार्ग थियो। यद्यपि तपाई आकारमा हुनुपर्दछ, किनकि यो चार दिनसम्म रहन्छ र साथै, उचाई (समुद्र सतहबाट २ 2430० मिटर) ले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ।
कजकोमा तपाईले देख्नु पर्ने सबै चीज बाहेक यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाई यसको ग्यास्ट्रोनोमी प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। पेरूको खाना संसारकै सबैभन्दा रमाइलो स्थान हो र एन्डियन सहर पनि यसको अपवाद छैन। कुज्कोको विशिष्ट भाँडाले बोटबिरुवाको उत्पादनहरू जस्तै मकै, आलु, क्विनोआ र खोर्सानीको बहुमूल्य प्रयोग गर्दछ।
ती भाँडा माझमा बाहिर खडा छ चिरी उचु। यसमा मकै, डिहाइड्रेटेड मासु वा झटकी, गुयना सुँगुर (कृन्तकको एक प्रकार), चीज, कुखुरा, कोचायुयो समुद्री शैवाल, तातो मिर्च, जर्की, ससेज र फिश रो छन्। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो सशक्त विधि हो।
सूपहरू मध्ये, चाइरो, भेडाको मासु, आलु, गाजर र सिमी, वा को एक स्टू क्विनोआ सूपअघिल्लो भन्दा हल्का र, मासुको सन्दर्भमा, तपाईंसँग छ बेक्ड गिनिया सुँगुर; the कुज्को पोर्क रिन्ड्सजो सुँगुरको मासुले बनेको हुन्छ; को काँडेदार खुट्टा, जुन प्याज, मरिच र लसुन, वा। सँग समान पोर्क अंगहरू हुन् बेक्ड पिग्लेट.
अर्कोतर्फ च्याउ कप्ची यो उत्तम छ यदि तपाईं शाकाहारी हुनुहुन्छ, किनकि यसले समावेश गर्दछ, यस उत्पादनको अतिरिक्त, सिमी, खोर्सानी, आलु, प्याज, पनीर, दूध, जैतुनको तेल र हुआकाटे, एक सुगन्धित जडिबुटी। खाजा गर्न, यो धेरै सामान्य छ चकलो (मकै) चीजको साथ।
सामान्य पेयको सन्दर्भमा, Cuzco the चिचा डे जोरा, जो माल्टेड मकैको साथ बनेको हुन्छ र यसमा मदिरा हुन्छ। स्ट्रबेरीसँग मिल्दा यसलाई भनिन्छ स्ट्रबेरी.
तपाईं यी सबै भाँडा र पेय स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ picanterías, ठाउँहरू जहाँ परम्परागत खाना तयार पारिन्छ। तिनीहरू पेरूको सबै शहरहरूमा असंख्य छन्। केवल कुज्कोको पुरानो शहरमा, तपाईं सय भन्दा बढी पाउनुहुनेछ।
कुज्कोमा फूड स्टल
तपाईका लागि कुजको भ्रमणको लागि उत्तम समय
एन्डियन सहर लगभग छ चार हजार मिटर समुद्री सतह माथि, उपत्यकामा फैलिएको Huatanay नदी र पहाडहरूले यसलाई गठन गर्दछ। यसको परिणाम स्वरूप यसको मौसम हो सबै वर्ष नरम, दुबै चिसो र गर्मी को सम्बन्ध मा। यसको तापक्रम प्रायः शून्य डिग्री भन्दा तल झर्छ वा तीस भन्दा बढी जान्छ।
यद्यपि उनीहरूको जलवायु विज्ञानमा भिन्न छन् दुई युगहरु धेरै स्पष्ट नोभेम्बर देखि मार्च यो चिसो हिउँको हावाले हल्का तापक्रमसहित वर्षाको मौसम हो। अर्कोतर्फ, अप्रिलदेखि अक्टुबरसम्म सुख्खा मौसम हुन्छ, दिनमा घाम र रातमा हिउँ रहन्छ।
फलस्वरूप तपाईको कुज्को भ्रमणको लागि उत्तम महिनाहरू त्यस्ता हुन् अप्रिल र मे। यद्यपि यो केही चिसो छ, तापक्रम पनि हल्का छ र वर्षाको असुविधा तपाईको अद्भुत स्मारकहरू हेर्नको लागि छैन। साथै, तपाईंले जुलाई र अगस्टमा यत्तिको पर्यटन फेला पार्नुहुने छैन।
कुज्कोमा कसरी पुग्ने र शहर वरिपरि घुम्ने तरीका
कुज्को, यसको ग्यास्ट्रोनोमी र यसको जलवायुमा के हेर्ने भनेर व्याख्या गरे पछि हामी केवल एन्डियन शहर कसरी पुग्ने भनेर कुरा गर्न सक्छौं। योसँग अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ, अलेजेन्ड्रो Velasco Astete, उड्डयनकर्ताको नाम जसले लिमा र कुज्को बीच पहिलो उडान १ 1925 २। मा एन्डिस मार्फत गरे।
यद्यपि यो एरोड्रोमले केहि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्राप्त गर्दछ। तपाई उत्तम यात्रा गर्नुहुन्छ लीमा र त्यहाँबाट, क्युजको लागि मार्ग बनाउने धेरै विमान मध्ये एक लिनुहोस्। थप रूपमा, भेलास्को एस्टेट छिट्टै बन्द हुनेछ (यो अनुमान गरिएको छ कि २०२२ मा) नयाँ चिन्चेरो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टले प्रतिस्थापन गर्नेछ।
जे भए पनि, एयरोड्रम अपरेसनमा कुजकोबाट पाँच किलोमिटर मात्र छ। त्यहाँ कुनै बस छैन। यो सबै को लागी तपाईको यात्रा को लागी यातायात को सबै भन्दा रमाईलो साधन बनाउँछ ट्याक्सी। यद्यपि, एन्डियन शहरमा ट्याक्सीमीटरहरू अवस्थित छैन। फालिनबाट जोगिन, गाडीमा चढ्नु अघि ड्राइभरसँग मूल्यमा सहमत हुनुहोस्। सामान्यतया राउन्ड १० र १ 10 तलसम्म। एक सोल लगभग ०.0,25 युरोमा साटासाट हुने भएकोले, हाम्रो मुद्रामा दर २.2,50० र 3,75 युरोको बीच हुनेछ।
अलेजान्ड्रो Velasco Astete एयरपोर्ट
त्यहाँ केहि मिनी बसहरू पनि छन् कम्बिस जो यस मार्ग गर्छन् र कुज्कोको बिभिन्न क्षेत्रहरू हुँदै जान्छन्। यद्यपि हामी तिनीहरूलाई सिफारिस गर्दैनौं। उनीहरूसँग ट्रंक छैन र त्यहाँ धेरै संख्यामा डकैतीहरू छन्, विशेष गरी पर्यटकहरूबाट।
एक पटक शहरमा, तपाईं यसलाई पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो धेरै ठूलो छैन र यसको सबै स्मारकहरू यसको ऐतिहासिक केन्द्रमा छन्। तपाईं पनि छ पर्यटक बसहरु, अघिल्लो भन्दा सुरक्षित र त्यो सब भन्दा लोकप्रिय साइटहरू मार्फत जान्छ। यसको मूल्य वरपर छ 20 तलहरु र तिनीहरूसँग दोस्रो-तल्ला रूपान्तरण योग्य छ।
यो धेरै फरक छ यदि तपाईं माचू पिचूको यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने। यो केवल पचास माईल टाढा छ, तर क्षेत्र जटिल छ। वास्तवमा, जब सम्म तपाईं गर्न को लागी हिम्मत Inca ट्रेल जुन हामीले तपाईंलाई पहिल्यै भनिइसकेका छौं, पवित्र शहरमा पुग्ने एक मात्र बाटो भनेको हो रेलवे। यात्रा लगभग तीन घण्टा लामो हुन्छ र यो एक सुन्दर अनुभव हो। किनभने ती पानोरमिक रेलहरू छन् जुन तपाईंलाई एन्डीजको अद्भुत दृश्य प्रस्ताव गर्दछ।
छोटकरीमा, यदि तपाइँ कुजकोमा के हेर्ने भनेर पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ भने, यस छोटो गाईडले सहयोगीको रूपमा काम गर्दछ। अब तपाईंले आफ्नो यात्रा बुक गर्नु पर्छ। यो अद्भुत शहर हो, विश्व सम्पदा। जे होस्, सधैं सम्झनुहोस् कि यो लगभग चार हजार मिटर अग्लो छ। र यो केही सर्तहरूको साथ मानिसका लागि सिफारिस गरिदैन। हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं आफ्नो डाक्टर संग परामर्श यात्रा गर्नु अघि
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » कज्कोमा के हेर्ने